कोच प्रमोद डलरमा बिकेका हुन त ? मेलिनालाई छोडेर किरणलाई रोज्नुको रहस्य यस्तो छ ।। – Ramailo Sandesh
नेपालकै नम्बर १ गायन रियालिटी शो ‘दि भ्वाइस अफ नेपालको सिजन ३ जारी छ । सिजन २ मा कोचको रुपमा रहेकी गायिका आस्था राउतले यो बर्ष समय दिन नभ्याएपछि उनको स्थानमा गायिका तृष्णा गुरुङलाई कोचको रुपमा अनुवन्धित गरिएको हो ।
३ ओटा कोचले मेलिनालाई रोज्नु को राज के होला ?
जसरी प्रतिस्पर्धी बीचमा प्रतिस्पर्धा छ उसैगरी कोच कोचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ मेरो टिमले जितोस् भनेर, हार्न कोहीपनि चाहँदैनन्।
मैले मेलीनालाई कम्जोर भन्न खोजेको हैन तर मेलिना भन्द किरणमा बढि क्ष्मता हो की ?
प्रमोद ले आदरणीय गुरू दीप सर ले भन्दा अत्याधिक एल्बम निकालेको छन् र भ्वाईस कै कुरा गरेपनि प्रमोद दीप सर भन्दा कम छैनन् । दीपलाई महागुरु कोच को ट्याग नदिएर प्रमोदलाई दिए पनि हुने। यहाँ अनुभवी र पक्का चाहिन्छ।
अहिले प्रमोदलाई नराम्रो भन्नु स्वाभाविक हो । किनभने किरणको आफ्नै फ्यान छन् र मेलिनाको पनि आफ्नै फ्यान छन्। यदी किरणलाई सेलेक्ट नगरेको भए पनि किरणको फ्यानले प्रमोदलाई उत्तिकै गाली गलोज गर्थे।
त्यसैले अहिले प्रमोदलाई नराम्रो टिकाटिप्पणी गर्नु स्वभाविक नै हो।
तर कोच प्रमोद यस्ता कोच हुन् की जस्ले प्रतिस्पर्धीको वास्तविक प्रतिभा चिन्छन् । तर समय समयमा प्रमोद विवादमा तानिएका छन् । तर दर्शकहरुले प्रमोद एक अनुशासित भएकोले उनी अनुशासित कोच रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्ता विवादका कारण विभिन्न सपना बोकेर सहभागी भएका प्रतिस्पर्धीहरुमा निराशा उत्पन्न भएको छ ।